Izindaba - Ake sibone ukuthi isicefe kufanele senziwe kanjani
Ukunemba kwesicefe kuphakeme kakhulu, ukunemba okuyisisekelo kokubhora okuhle kungafinyelela ku-IT8 ~ IT7, futhi ukuvula kungalawulwa ngaphakathi kokucaciswa okungu-0.01mm.Uma kuyisicefe, ukucacisa imishini kungafinyelela ku-TT7-IT6, nekhwalithi yendawo Kuhle, ngokubhora okujwayelekile, ubukhulu be-Ra bungu-1.6 ~ 0.8 m. Ake sibone ukuthi isidina kufanele senziwe kanjani.
Izinyathelo eziyizidina kanye nokuqapha
Ukufakwa kwe-cutter okuyisidina
Kubaluleke kakhulu ukufaka ithuluzi eliyisidina elisebenza ingxenye, ikakhulukazi yokulungiswa komsebenzi usebenzisa isimiso se-eccentric. Ngemuva kokufaka ithuluzi eliyisicefe, kufanele linake ukubuka indiza enkulu yensimbi eyisicefe, noma ngabe isezingeni elifanayo nesiqondisi sokuphakelayo senhloko yethuluzi eliyisicefe? Faka ezingeni elifanayo ukuqinisekisa ukuthi imiphetho yokusika eminingi ezingeni le-machining ejwayelekile.
Ithuluzi eyisicefe zama isidina
Ithuluzi eliyisicefe lizolungisa isabelo esingu-0.3-0.5mm ngokuya ngezidingo zenqubo yokukhiqiza, futhi imbobo yokuphinda uhlele futhi ifane nayo izolungisa isabelo se-boring ≤0.5mm esibi ngokuya ngesabelo somgodi wokuqala. Imali ekhokhwayo elandelayo eyisicefe elandelayo izoqinisekiswa.
Ngemuva kokuthi ithuluzi eliyisicefe selifakiwe futhi labolekiswa, kuyadingeka ukuhlola nokuqinisekisa ukuthi ukulungisa iphutha lethuluzi eliyisidina kuyahlangabezana yini nezidingo zesicefe esinzima.
Ngaphambi kokubhora nokwenza imishini, hlola ngokucophelela ukuthi ngabe i-tooling, ireferensi yokuma kwendawo yokusebenza nento ngayinye yokuma izinzile futhi inokwethenjelwa.
Uyini ububanzi bomgodi wokuqala ozofakwa ngomshini wokufaka izikhali? Bala ukuthi kungakanani isabelo semishini esisele?
Bheka ukuthi ukunemba kokuma okuphindaphindwayo nokunemba okulinganiselayo kwemishini (othini lokuphotha) kuyahlangabezana yini nezidingo zemishini ngaphambi kokubhora.
Inani le-runout eliguqukayo lokumiswa kwamandla adonsela phansi kwebha eyisicefe kumele lihlolwe kunqubo yokwengeza enezingqimba umgodi oyisicefe ukunciphisa ithonya lokudlidliza kwe-shear centrifugal ngokuguqula imingcele yokusika ngokunengqondo.
Ngokuya ngesithukuthezi esibi, isinhlawulo senhlawulo, izinyathelo ezinhle zokubhidliza ukusabalalisa ngokunenzuzo isabelo sesithukuthezi, isabelo esiyisicefe esibuhlungu cishe esingu-0.5mm kufanelekile; Isicefe esihle, umkhawulo omuhle wesicefe ongaba ngu-0.15mm, ukugwema i-semi-fine imajini eyisicefe ebangelwe imajini eningi kakhulu ake umsiki athinte ukunemba kokulungiswa okuhle komugqa oyisidina.
Kunzima ukucubungula izinto zokwakha, ukucacisa okuphezulu kuyisidina (ukubekezelelana .00.02mm) kungakhuphula izinyathelo zokucubungula ezinhle, umkhawulo oyisicefe ungekho ngaphansi kuka-0.05mm ukugwema indawo yokusika enamathela ebusweni.
In inqubo ithuluzi kuyisicefe ithuluzi, kufanele unake ukugwema ithuluzi kuyisicefe ukusebenza okuyingxenye (blade nommese block) kanye nomthelela block ummese, umonakalo blade futhi ummese block Umhlahlandlela inkatho ukuze ithuluzi isidina ukulungiswa value kuthinta ukunemba kokuvula imishini.
Enkambeni yesicefe, naka ukugcina ukupholisa okwanele, ukwandisa umphumela wokuthambisa wezingxenye zemishini ukunciphisa amandla okusika.
Ukususwa kwe-Chip kwenziwa ngokuqinile kusinyathelo ngasinye sokucubungula ukuvimbela ukubamba iqhaza kwe-chip ekusikeni kwesibili ukuze kuthinte ukunemba kwemishini kokuvula kanye nekhwalithi yendawo.
Ngesikhathi senqubo eyisicefe, hlola izinga lokuhuzuka lomsiki (blade) nganoma yisiphi isikhathi, bese ulibuyisela esikhundleni ngesikhathi esifanele ukuqinisekisa ikhwalithi yokuvula imingcele; Isinyathelo esihle sokudina asivunyelwe ukufaka indawo yensimbi ukuvimbela amaphutha; Ngemuva kwesinyathelo ngasinye semishini, yenza ngokuqinile izidingo zenqubo yokulawulwa kwekhwalithi, uvivinye ngokucophelela ukutholwa kwangempela kwemishini futhi wenze irekhodi elihle, ukuze kube lula ukuhlaziywa, ukulungiswa nokwenza ngcono imishini eyisicefe.